बजारको आकारले प्लान्ट स्थापना सम्भव छैन - Karobar National Economic Daily
बजारको आकारले प्लान्ट स्थापना सम्भव छैन
query_builderMarch 16, 2017 9:22 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility3849
अधिकृत सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका प्रमुख कार्यकारी राजन श्रेष्ठ । तस्वीर :सुनिल प्रधान
टाटा गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिमा १८ वर्षअघि टेक्निकल म्यानेजरका रूपमा प्रवेश गरेका राजन श्रेष्ठ अहिले सोही कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् ।
सिप्रदीको विभिन्न तहमा रहेर काम गरिसकेका उनी चार महिनाअघि मात्र सीईओ भएका हुन् । सिप्रदी नेपालमा पूर्ण सिस्टममा चलेको कम्पनीका रूपमा रहेको छ । कम्पनीका विभिन्न पदमा रहँदा व्यवस्थापकीय कुरादेखि उपभोक्तासँग गर्ने डिलिङसम्ममा गहिरो अनुभव छ उनीसँग ।
विगत ३५ वर्षदेखि नेपालमा भारतीय सवारी उत्पादक कम्पनी टाटाका सवारी सिप्रदीले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सुरु–सुरुमा कमर्सियल सवारी उपलब्ध गराउँदै आएको सिप्रदीले हाल टाटाका सबैजसो उत्पादन नेपालमा ल्याउँदै आएको छ ।
कमर्सियल सवारीको क्षेत्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा आगटेको टाटाका प्यासेन्जर कार सेगमेन्टमा पनि राम्रो उपस्थिति छ । नेपालको अटो बजार, टाटाको उपस्थितिलगायत विषयमा कारोबारकर्मी केदार दाहाल र शिव बोहराले प्रालिका सीईओ श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी ः
राष्ट्र बैंकले अटो लोनमा ५० प्रतिशतको सीमा तोकेपछि व्यवसायमा कस्तो असर परेको छ ?
अटो लोनको सीमा प्यासेन्जर सवारीमा मात्र हो । यो कमर्सियल सवारीमा होइन । कमर्सियल सवारी उत्पादनशील क्षेत्रका रूपमा रहेकाले यसमा त्यो बन्देज छैन ।
प्यासेन्जर कारमा लगाइएको सीमाले यसको व्यवसायमा स्वाभाविक प्रभाव पर्छ । पहिले ३० प्रतिशत क्यास र बाँकी लोनमा थियो भने अब ५० प्रतिशत क्यास तिर्नुपर्ने भएको छ । सवारी खरिदका लागि आवश्यक रकम क्यासमा नहुन सक्छ ।
नेपालीको आम्दानीको जुन अवस्था छ, त्यसले पनि लोनमा सवारी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा प्यासेन्जर सेगमेन्टमा राम्रै प्रभाव पर्ने देखिन्छ । कमर्सियल सेगमेन्टमा भने कुनै सीमा नतोकिएकाले असर देखिँदैन ।
अहिलेको मुख्य मुद्दा भनेको बैंकहरूसँग पैसा नहुनु हो । यसले सवारी व्यवसायमा ठूलो असर पारेको छ । त्यति असर ५० प्रतिशतको क्यापले पनि पारेको छैन । यो समस्याको समाधानका लागि बैंकिङ प्रणालीमा कहिले पैसा आउँछ ? हामी यो पर्खिरहेका छौं ।
कमर्सियल सवारीमा ५० प्रतिशतको सीमा नभए पनि प्रभावित छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
पक्कै पनि । जब बैंकहरूसँग लगानी गर्ने पैसा हुँदैन, त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्छ । प्यासेन्जर तथा कमर्सियल सबै सवारी लोनमा नै बिक्री हुने गरेको छ । त्यसमा पनि कमर्सियल सवारी त झनै शतप्रतिशतजस्तै हायर पर्चेजमै जाने गरेको छ ।
बैंकहरूसँग लगानी गर्ने पैसा नै नभएपछि कमर्सियल सवारीमा असर नपर्ने भन्ने कुरै आउँदैन । सवारी बिक्री नै नभएको भने होइन । हामीले फाइनान्सहरूमार्फत म्यानेज गरिरहेका छौं । डिपोजिटमार्फत केही पैसाको सर्कुलेसन भइरहेकाले अलिअलि काम भइरहेको छ । पैसा अभावले कमर्सियल सवारीको बिक्री भने निकै प्रभावित भएको छ ।
कमर्सियल सवारीमा पनि यो समस्या आउनु भनेको विकास निर्माणको काम पनि प्रभावित हुनु होइन ?
हो, अहिले देशैभर विभिन्न ढंगले विकास–निर्माणका गतिविधि भइरहेका छन् । सिमेन्ट उद्योगदेखि सबै क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने निर्माणजन्य सवारीको माग अधिक छ । निर्माणको कामदेखि उत्पादित सामान ओसारपसार गर्नसम्म सवारी साधन आवश्यक पर्छ । यस्ता सवारीको फाइनान्स हुन नसक्ने हो भने देशको विकास–निर्माण नै प्रभावित हुन्छ ।
कति सवारी आयात मात्र गर्ने ? नेपालमै एसेम्बल गर्न सकिन्छ भन्ने बारम्बार कुरा उठि नै रहेको हुन्छ, तर कामचाहिँ किन हुन नसकेको हो ?
सबैभन्दा पहिले सवारी उद्योग आइसकेपछि त्यसको उत्पादन र खपतबीचको सामन्जस्यता हेरिन्छ । सवारी बजारको आकार कत्रो छ ? बजारको आकार निकै सानो छ भने त्यसको उत्पादन लागत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।
आयात गर्नुभन्दा यहाँ उत्पादन गरिएका सवारी महँगो भयो भने त्यसको अर्थ के ? बजार नै सानो छ भने त्यहाँ उत्पादन गरेर खपत नभएका सामान अन्यत्र निर्यात हुने अवस्था आउनुप¥यो । त्यो अवस्था हाम्रो देशमा बनिसकेको छैन ।
नेपालको सवारी उद्योगको आकारले उत्पादनलाई जस्टिफाइ नै गर्दैन । प्लान्ट स्थापना गरिसकेपछि एउटा मात्र सवारी उत्पादन गर्ने भन्ने पनि हुँदैन । एउटा एप्लिकेसनले कतिवटा सवारी उत्पादन हुने त्यो पनि हेर्नुपर्छ । जबसम्म बजारको आकार विस्तार हुँदैन त्यो बेलासम्म उत्पादनमा जान गाह्रो छ ।
विगतमा टाटाले नेपालमा प्लान्ट स्थापना गर्ने चर्चा भएको थियो । कुनै एउटा सेगमेन्टका लागि एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना गर्न सकिँदैन ? टाटाले यसबारे के गरिरहेको छ ?
हामीले पहिले नेपालमा सानो गाडीका लागि प्लान्ट राख्न सकिन्छ कि भनेर एउटा फिजिबिलिटी अध्ययन गरेका थियौं । त्यसमा हामीले टाटासँग धेरै छलफल पनि ग¥यौं । त्यसपछि कम्प्लिट बिजनेस प्लान बनाइसक्दा नेपालमा साना सवारीको बजार ज्यादै सानो देखियो । यो अवस्थामा बजारले प्लान्ट स्थापना जस्टिफाई नगर्ने देखेपछि तत्कालका लागि त्यो योजना अघि नबढाएको हो ।
सवारी उत्पादन गरेपछि त्यो यहीँ नै खपत गर्नुपर्छ भन्ने छैन । निर्यात गर्नका लागि समस्या कहाँ रहेछ ?
पहिलो कुरा, हामीले यहाँ सवारी उत्पादन गरिसकेपछि अन्यत्र उत्पादन भएका सवारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं वा सक्दैनौं त्यो हेर्नुपर्छ । यहाँ सामान उत्पादन गरिसकेपछि चिनियाँ, भारतीयलगायत सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्याे ।
नेपालको सवारी बजार सानो हुनेबित्तिकै हामीले बाहिर पठाउनुपर्छ । सवारी उत्पादनका लागि हजारौं पार्टपुर्जा चाहिन्छ, जुन रिसोर्स बेस हुन्छ । हाम्रोमा त्यो रिसोर्स बेस नभएकाले सबै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले उत्पादन लागत नै धेरै हुन्छ । यी सबै कुराले नेपालमा प्लान्ट स्थापना गर्ने कुरा व्यावहारिक नदेखिएको हो ।
टाटा कमर्सियल सवारीको क्षेत्रमा नेपाली बजार अब्बल नै छ । प्यासेन्जर सेगमेन्ट कमजोर देखिएको हो ? किन आक्रामक बजार विस्तारमा जान नसकेको हो ?
धेरै पहिलेदेखि नै टाटाको नाम कमर्सियल सवारीसँग जोडियो । टाटा ब्रान्ड भन्नु कमर्सियल सवारी जस्तै भयो र बलियो उपस्थिति रह्यो÷रहँदै आएको छ । त्यसपछि प्यासेन्जर सवारी आयो र बजारमा जम्न खोज्यो ।
कमर्सियल सवारी उत्पादन गर्ने टाटाले प्यासेन्जर सवारी बनाउँदा कस्तो बनायो भन्नेतिर मानिसहरूले सोच्थे । तर, अहिले टाटाले प्यासेन्जर कार सेगमेन्टमा धेरै राम्रो गरिसकेको छ । टाटाका प्यासेन्जर कार विश्वस्तरीय छन् । टाटाको होराइजन नेक्स्ट प्ल्याटफममा बनेका जेस्ट, बोल्ट, टियागो विश्वमा आएका उच्च प्रविधिमा आधारित छन् ।
विगतमा मानिसको सोचाइ टाटा कमर्सियल सवारी उत्पादक भएकाले प्यासेन्जर राम्रो नहोला कि भन्ने थियो । तर, अहिले परिस्थिति धेरै बदलिइसकेको छ । टाटाका प्यासेन्जर सवारी प्रयोग गरिसकेपछि मानिसहरूमा ए यो पनि धेरै राम्रो रै’छ भन्ने परिसकेको छ । त्यसैले प्यासेन्जर सेगमेन्टमा हाम्रो बजार हिस्सा बढ्दै गएको छ । टाटाका सवारी अप्रेसन कस्टका हिसाबले पनि उपयुक्त छ ।
कमर्सियल सवारीमा पनि धेरै ब्रान्ड भित्रिएका छन् । यसले टाटालाई प्रतिस्पर्धी बनाएको छ वा बजार खस्काएको छ ?
बजारमा प्रतिस्पर्धी आउनु नकारात्मक होइन । जहाँ बजार देख्छ त्यहाँ उत्पादक स्वाभाविक रूपमा आउँछ । नेपालका कमर्सियल सवारीको बजार बढी नै छ । धेरै ब्रान्ड आएपछि सबैले आफ्नो हिस्सा लिन नै खोज्छन् ।
बजारमा प्रतिस्पर्धी आउँदैनथे भने हामी भएकै बजारमा रमाउँथ्यौं कि ? त्यस्तो अवस्थामा हामी अलि सुस्ताएको हुन्थ्यौं कि ? तर बजारमा आएको प्रतिस्पर्धाले हामीलाई थप प्रतिस्पर्धी हुन प्रेरित गरेको छ । कमर्सियल सवारीमा हामीले अरूको बजारलाई हेर्नेभन्दा पनि हाम्रै बजार हिस्सालाई बढाइरहेका छौं । कमर्सियल सवारीको क्षेत्रमा टाटाको बेन्चमार्क टाटा नै हो नेपालका लागि ।
हामीले गरिरहेका गतिविधिलाई थप परिष्कृत गरी हाम्रै बजार हिस्सा उछिन्न लागि गरेका छौं । यसका लागि हामी उपभोक्ता केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं । उपभोक्ता के खोज्छन्, हामी त्यो सक्दो छिटो उपलब्ध गराउन उद्दत छौं ।
त्यस्तै सिप्रदीले म्यानपावर विकासका लागि व्यापक लगानी गरेको छ । यसले आफ्नो सवारी बिक्रीमा सहयोग पु¥याओस् । बजारमा प्रतिस्पर्धीहरू थपिँदै गर्दा पनि टाटाको बजार हिस्सा अहिलेको अवस्थामा समेत बढिरहेको छ । यो अवस्थामा बजार हिस्सा जोगाउन लाग्नुपर्नेमा बढाउन सफल भएका छौं ।
कमर्सियल सवारीमा टाटाको बजार हिस्सा कति हो ?
अहिले नेपालमा कमर्सियल सवारीमा टाटाको बजार हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । यो बढ्दो क्रममै छ । त्यस्तै प्यासेन्जर सेगमेन्टमा ११÷१२ प्रतिशत बजार हिस्सा पुगिसकेको छ ।
यसमा प्रोडक्ट बेसिसमा जाँदा युटिलिटी भेइकल भनिन्छ सुमोलाई, यसमा टाटा मार्केट लिडर हो । यसमा हाम्रो ७०÷७२ प्रतिशत बजार हिस्सा छ । कार सेगमेन्टमा हामी तुलनात्मक रूपमा अलि कमजोर छौं, तर पनि सेडानमा अहिले निकै सुधार भएको छ । त्यस्तै ह्याचब्याक सेगमेन्टमा पनि टियागोको उपस्थितिले मजबुत बनाउँदै लगेको छ ।
प्यासेन्जर सेगमेन्टलाई बलियो बनाउनकै लागि नानो कार ल्याइयो । तर, यो सफल हुन सकेन नि ?
म टाटाको नानो कार सफल नभएको भन्ने कुरामा सहमत छैन । नानो एकदमै सफल भएको कार हो । हामीले एकैपटक १ सयवटा र नेपालमा त्यतिबेला करिब ५ सय नानो बिक्री गर्न सफल भएका थियौं ।
अहिले तपाईंले नानोको जो–कोही ग्राहकलाई सोध्नुहोस्, उनीहरू कोहीबाट नानो प्रयोगपछि सन्तुष्ट नभएको जवाफ पाउनु हुन्न । भयो के भने मानिसको सोचाइले केही हिट गरेको हो । भारतमा जति सस्तो कार भए पनि नेपालमा आउँदा त्यो महँगो पर्छ भन्सारका कारण ।
हामीलाई खुसी के लाग्छ भने सबै नानोका उपभोक्ता सन्तुष्ट छन् । मानिसहरू नानोबाट अपग्रेड भइरहेका छन् । रिसेलमा आएका नानो कार सबैभन्दा छिटो बिक्री हुने गरेको छ अहिले पनि । यो स्टक बस्दै बस्दैन । भन्सार धेरै हुँदा हामीले सोचेअनुरूप सस्तो दिन नसकिएको हो ।
टाटाका नयाँ सवारी ल्याउने योजना के छ ?
टाटाले प्यासेन्जर सेगमेन्टमा हरेक वर्ष दुईवटा नयाँ सवारी ल्याउने हो । कमर्सियल सवारीको क्षेत्रमा नेपालमा जेजस्ता सवारीको आवश्यकता पर्छ त्यही अनुरूप सवारी भिœयाउँदै आएका छौं ।
टाटाको जति सवारी रेन्ज अन्य कम्पनीमा छैन । यो हाम्रो अत्यन्त सबल पक्ष हो । अन्य कम्पनीमा जाँदा दुई÷तीन वटामा जानुपर्ने सवारी रेन्ज हाम्रोमा एकै ठाउँमा उपलब्ध हुन्छ । उपभोक्ताको आवश्यकता के छ, हामी त्यहीअनुसार सवारी उपलब्ध गराउँछौं ।
अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सवारीको उपलब्धता हो । देशका हरेक स्थानमा सवारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । हामी त्यसका लागि नेटवर्क विस्तारमा लागिपरेका छौं ।
सेवा विस्तारमा आक्रामक रूपमा लाग्नुभएको हो ?
हो, हामी सर्भिसको उपलब्धतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौं । टाटाको स्ट्रेन्थ स्पेयर पाटर््स र सर्भिस सबै ठाउँमा उपलब्ध छ । हामीले प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुरूप ट्रेन्ड म्यानपावरसमेत विकास गरिरहेका छौं ।
टाटासँग सिटिइभिटीबाट प्रमाणित विश्वस्तरीय ट्रेनिङ सेन्टर छ । हामी यसमै सीमित छैनौं, ट्रेनिङ सेन्टर काठमाडौंमा छ तर प्राविधिकहरू देशभर छन् । त्यसका लागि हामीले नयाँ कन्सेप्ट ‘ट्रेनिङ अन ह्विल’ ल्याएका छौं ।
एउटा समूहमार्फत यो योजनाअन्तर्गत सबैलाई दक्ष बनाउने हो । स्पेयर पार्टका लागि हामीले नयाँ कम्पनीमार्फत नै अघि बढेका छौं । टाटाको स्पेयर पाटर््स जहाँ पनि पाइन्छ भन्ने छ, यसलाई अझ मजबुत बनाउन लागिरहेका छौं ।
हामीले सर्भिसका लागि वर्कसपमा ठूलो लगानी गरेका छौं । देशका मुख्य सहर तथा हाइवे लाइनमा वर्कसप बनाइरहेका छौं । यो हाम्रो आफ्नै नेटवर्कमा हो । अन्य अथोराइज दिने क्रम पनि बढी नै रहेको छ ।
यो त सहरी क्षेत्र तथा हाइवेको कुरा भयो । पहाडी क्षेत्रमा सेवाप्रवाहका लागि मोबाइल भ्यान उपलब्ध गराएका छौं । साइटमै गएर सर्भिस दिनका लागि १८ वटा मोबाइल भ्यान छन् । योसँगै हामीले पछिल्लो समय मोबाइल वर्कसप ल्याएका छौं ।
मोबाइल वर्कसपमा वर्कसपका लागि आवश्यक इक्युपमेन्टमात्र बुझिन्छ, तर हामीले स्पेयर पाटर््ससहितको मोबाइल वर्कसप बनाएर यसबाट समेत सेवा दिइरहेका छौं ।
हामीले टाटाको कुनै गाडी बिग्रियो, ४८ घण्टाभित्र बनाउन सकेनौं भने कम्पेन्सेसन दिन्छौं भनेका छौं ।
यसले हामी आफैंलाई उपभोक्तामा समयमै सेवा उपलब्ध गराउन प्रेसर दिइरहेका छौं । हामीले उपभोक्ताको लागि टोल फ्री नम्बरसमेत चलाएका छौं, जसमा गुनासो तथा सुझाव दिन सकिन्छ ।
सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन रोक लगाएको छ । गाडीको आयु कति वर्ष हुने हो ?
गाडीको लाइफ कति हुने भन्ने कुरा ठ्याक्कै तोक्न सकिन्न । यसमा धेरै कुराले प्रभाव पार्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा सवारी कुन एप्लिकेसनमा चलाएको हो, सडकको अवस्था कस्तो छ, गाडी कति कुदेको छ, इन्धनको गुणस्तर, ड्राइभिङ ह्याबिटको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ ।
मानिसको आवश्यकता, प्रविधिमा आएको परिवर्तनले पनि यसमा प्रभाव पार्छ । सुरक्षा तथा प्रदूषण पनि प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ । सरकारले जुन नीति अवलम्बन गरेको छ यो राम्रो हो । यसमा व्यवसायीले असहयोग नै गरेको जस्तो लाग्दैन । यसमा सरकारले के कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा भने महŒवपूर्ण हुन्छ ।
सहज छैन गाडी उत्पादन
व्यवसायीहरू ट्रेडिङ बिजनेसमा मात्र लागे भन्ने आरोप सरकारको छ । तर, व्यवसायीहरू भने नेपालजस्तो मुलुकमा गाडी उत्पादन सहज नभएको बताउँदै आएका छन् । एक–दुईवटा प्लान्ट आउँदै छन् ।
एसेम्बलिङ उद्योगका लागि सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । दुईपांग्रे त अबको केही समयमै बजारमा आउने कुरा मिडियामार्फत आइसक्यो । दुईपांग्रेमै पनि सम्बोधन हुन बाँकी केही इस्यु छन् । उत्पादन थालेर त्यसबाट धानिने गरी अघि बढ्ने प्रयत्न जारी छ ।
दुईपांग्रेका लागि मध्यम लगानी लाग्छ भने चारपांग्रे एसेम्बलिङ प्लान्टका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । एसेम्बलिङ प्लान्टकै लागि मात्र २–३ अर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्छ । अन्य पार्टपुर्जा खरिदका लागि आवश्यक लगानी त अलग छ ।
यससँगै एसेम्बलिङ प्लान्टका लागि विद्युत् आवश्यक पर्छ । विद्युत्को नियमित आपूर्ति नहुने हो भने एसेम्बलको निरन्तरतामा बाधा पुग्छ । दुईपांग्रेको प्लान्टका लागि पनि विद्युत् नियमित चाहिन्छ तर चारपांग्रेको उत्पादन प्रक्रिया अटोमेटिक तवरले हुन्छ ।
अर्को एसेम्बलिङ प्लान्टमा लगानी धेरै चाहिने भएकाले सरकारी सहुलियत बढ्नै प¥यो । अहिले दुईपांग्रेका लागि ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिइएको छ तर चारपांग्रेका लागि २५ प्रतिशत मात्र छ ।
अझ सरकारले चारपांग्रे एसेम्बलिङ प्लान्टमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगका आवश्यकता नबुझिकन लगाउने आरोप भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपालजस्तो सानो बजार भएको मुलुकमा थोरै संख्यामा उत्पादनमा जाँदा खर्चले धान्न नसक्ने व्यवसायी बताउँछन् । उत्पादनमूलक उद्योग, सेवाक्षेत्र, स्वास्थ्यलगायतमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूले सुरक्षित महसुस नै गर्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
केही समयअघि टाटाले पनि गाडी उत्पादन गर्ने भने पनि बजारको अध्ययनपछि पछाडि हटेको थियो । त्यस्तैगरी गोल्छाले मुस्ताङ म्याक्स केही वर्ष उत्पादन गरेर बन्द गरिसकेको छ । यसको मुख्य कारक सरकार बदलिएसँगै नीति बदलिने हो वा यो अर्कै हो भनेर व्याख्या हुने डर व्यवसायीमा छ ।
व्यवसायीहरूमा अझै पनि उत्पादनमा जाने आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन । व्यवसायीहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छन् त्यसका लागि वातावारण नभएको आरोप लगाउँदै आएका छैन । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सरकारले नीतिमा स्पष्टता दिनु आवश्यक छ ।
अटोलोनको कडाइले राजस्वमै समस्या
अहिले पनि सवारीलाई अनुत्पादक र विलासी वस्तु भनिँदै आएको छ । यसले अर्को एक उत्पादनले अर्को उत्पादनलाई जोड्ने काम गर्छ । उत्पादनलाई एउटा साइकलमा ल्याउने काम अटोक्षेत्रले गर्छ । अटोक्षेत्र नभई कसरी उत्पादन उद्योग सञ्चालन हुन्छन् ? यसले त मोबिलिटी दिएको छ ।
यसले व्यक्ति, समाज, अर्थतन्त्र र देशलाई चलायमान बनाउँछ भने कसरी अटोक्षेत्र अनुत्पादन भयो ? राष्ट्र बैंकले अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्यो भन्दै अटो लोनमा क्याप सिस्टम लगाइदिएको छ ।
अब अर्को पक्षतर्फ एउटा व्यक्तिले कार्यक्षमता दक्षता हासिल गर्न प्रयोग गरिने सवारी साधन हो । मानिसले सवारी साधन किन चहियो भने कार्य क्षमता र दक्षता वृद्धि गर्न प्रयोग गर्ने हो ।
यसले व्यक्तिगत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गरेको छ भने यो कसरी अनुत्पादक हुन्छ ? अब अटोक्षेत्रले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा पु¥याएको टेवाको यहाँ चर्चा गरिरहन आवश्यक जस्तो लाग्दैन ।
असर त व्यापक सुरु भइसकेको छ । अहिले गाडीका शोरुमहरू खाली भइसकेका छन् । नाकामा हजारौं सवारी साधन लाइन लागेर बसेका छन् । अब यसको व्यापारमा ७५ प्रतिशत गिरावट आउने घोषणा व्यवसायीले गरिसकेका छन् ।
जसले देशको ढुकुटीमा जम्मा हुने रकममा प्रभाव पार्ने राजस्व घट्नेछ । त्यो अब सुरु हुन्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सवारी भनेको भविष्यमा योजना बनाएर लिने हो । ७०/८० प्रतिशत लोनमा हो ।
सिप्रदी ट्रेडिङ प्लान्ट स्थापना टाटा गाडी